Warshadda Miiska Kombiyuutarka - Soosaarayaasha Kombuyuutarada Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Miiska Kombiyuutarka YF-GD002
Naqshad ku-meel-gaadh ah: Mid khafiif ah oo casri ah, miiskan kumbuyuutarka xafiiska cad ee guriga ayaa ah isku-darka ugu fiican ee shaqo, adkaysi iyo naqshad qaab casri ah.
Miis kombuyuutar qoraal fudud oo is haysta ah oo loogu talagalay xafiiska guriga
Miiskan casriga ah, way kuu fududahay inaad ku abuurto xafiiska guriga riyadaada.
Miiska kombuyuutarka casriga ah ee xafiiska guriga
Miiskan casriga ah ee gaarka ah waxaa ku jira 4 khaanad 'khaanad', oo ku yaal bidixda ama gacanta midig taas oo kuxiran baahidaada.
Miiska kombiyuutarka xafiiska melamine cad oo leh 4 khaanad oo loogu talagalay alaabta guriga ama qalabka xafiiska
Miiskan loogu talagalay qaab-dhismeedka 'minimalist design' wuxuu la yimaadaa 4 khaanad, 1 saxaarad kumbuyuutar, iyo 1 khaanad furan oo keyd ah oo si fudud ugu heli kara waraaqahaaga ama waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka ah.
Miiska kumbuyuutarka ee is haysta ee casriga ah ee xafiiska guriga oo leh 1 khaanad, 2 kabadh furan, 1 shelf hoose
Miiska kombuyuutarka ee is haysta waa mid ku habboon xulashada qolka jiifka, xafiiska guriga, aqal yar, ama qol jiif ah, oo lagu dhejin karo gees ama derbi kasta si aad si buuxda uga faa'iideysato booska oo aad ugu raaxeyso noloshaada.
Waxaa loo isticmaali karaa sida miisaska wax lagu qoro, xarumaha shaqada, miisaska shirarka, miisaska kombiyuutarka / laptop.
Miiska kombiyuutarka xafiiska kombiyuutarka casriga ah ee qaabka leh shelf furan
Miiska kumbuyuutarradan ayaa gabi ahaanba waa qaab casri ah oo casri ah, waxay ku timid 1 desktop, iyo 3 khaanadood oo furan.
Miiska kombiyuutarka ee l qaabeeya oo laga dhisay tuubbo bir bir ah oo culus oo culus iyo Hollow-Core Panel oo qaro weyn leh, MDF melamine veneered oo ah dab-caddeyn, biyo-caddeyn, iyo xoqan ka hortag ah.
Miiska Kombiyuutarka YF-CD003
Miiska kombiyuutarka casriga casriga casriga miiska kombiyuutarka geeska leh oo leh laabta khaanadda.
Muuqaal Casri ah iyo naqshad feker leh: Miiskani wuxuu leeyahay khadad casri ah iyo muuqaal muuqaal ah oo dhammaystiraya qurxinta guriga.
Miiska Kombiyuutarka YF-CD002
Miiska kombiyuutarka ee casriga ah ee qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qoryaha leh shelf
MAADDIYADDA, Miiskan casriga ah iyo midka fudud ee L-qaabeeya waxaa lagu dhisay alwaax waara oo waara (loox E1 loox) waxaana lagu heli karaa midabbo badan oo melamine dusha laga miiray. (Caddaan, geed, walnut).
7 khaanado u qoraya miiska kombiyuutarka xafiiska guriga, qolka waxbarashada ee dhallinta. Midab cad iyo geed allaale. Iyada oo leh buug-gacmeed
Sida loo doorto miiska saxda ah ee xafiiskaaga yar ee guriga, qolka waxbarashada, qolka jiifka ama aqalka.
Miiska Kombiyuutarka YF-GD003
Xafiiska guriga Miiska kumbuyuutarka casriga ah ee dhalaalaya cad, oo ay ku jiraan 3 khaanad khaanad, saxaarad kumbuyuutar
Inaad khibrad fiican u leedahay ka shaqeynta guriga, sidoo kale qurxin wanaagsan qolkaaga jiifka, ama xafiiska guriga.
Miiska Kombiyuutarka YF-GD-001
Adkaysi, naqshad aan waqti lahayn iyo dhammaystir qurux badan.
Miisaska kumbuyuutarrada xafiisyada xafiisyada sare ee dhalaalaya ee sarreeya ayaa ah xulasho sii kordheysa oo caan ah sababtoo ah wax ku oolnimadooda iyo awooddooda ay ku habboonaan karaan goob kasta oo casriga ah.
Miiska casriga ah ee qorista miiska barashada buugaagta loogu talagalay carruurta
Miiskaan qaabeynta ah ee fudud oo keyd badan leh, 1 khaanad, 1 kabadh, 1 qolal furan oo buugaag furan ah.